DAAWO: Nin u eg Lionel Messi oo lagu xiray Iran kadib markii lagu jahawareeray | Entertainment and News Site
Home » bulshada » News » xogwaran » DAAWO: Nin u eg Lionel Messi oo lagu xiray Iran kadib markii lagu jahawareeray
DAAWO: Nin u eg Lionel Messi oo lagu xiray Iran kadib markii lagu jahawareeray
daajis.com:- Booliis dalka Iiraan ayaa xiray wiil arrday ah oo aad ugu eg ciyaaryahanka caanka ah ee reer Argentine iyo kooxda Barcelona ee Lionel Messi.
Dad badan oo ku sugan magaalada Hamaden ee dalka Iiraan ayaa doonayay in ay sawirro la galaan Reza Parantes, oo laga aqoon Messi, waxayna booliska qabteen isaga iyo gaarigiisiiba si loo joojiyo jahwareerka ka dhashay dad badan oo isugu soo arruuray ninkan.
“Waan ku faraxsanahay in aragtidayda ay ku farxaan, farxaddaas ayaana dhiirigalin badan ka helaa”.
Warbaahin badan ayaa ka dalbatay in ay waraysi la yeeshaan, qandaraasyo xayaysiin dhar ayuuna helay.
Waxaa kale oo uu sheegay in uu baranayo xeelado kubadeed si uu ugu sii ekaado Messi.